गभर्नरले गरे सिटिजन्स बैंक ६० औँ शाखाको उद्घाटन - गभर्नरले गरे सिटिजन्स बैंक ६० औँ शाखाको उद्घाटन
२०७४, १८ भदौ, 01:55:26 PM
१८ भदौ, काठमाडौं । नेपालको बैंकिंग क्षेत्रमामा फरक पहिचान बनाउन सफल रहेको सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो ६० औं शाखा पाल्पाको छहरामा खोलेको छ । आज(मिति२०७४ भाद्र १८ गते) नेपाल राष्ट्र बैंक का गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपालले उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त समारोहमा जिल्लाका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, ब्यापारी, नागरिकसमाजका अगुवाहरुको उपस्थिथि रहेको थियो ।
छहारा शाखाको बिधिबत समुद्घाटन संगै सिटीजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ग्राहक महानुभाबहरुलाई देशभरी फैलिएका यस बैंकको ६० वटा शाखा, ५९ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित आधुनिक बैकिङ्ग सेवा पु¥याएको छ । बंैकले करिब ३ लाख ग्राहकहरुलाई सेवाप्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।. साथै आफ्नो ग्राहकवर्गलाई रेमिट्यान्स सेवा, ड्राफट, भिसा ए.टि.एम. कार्ड सेवा, भिसा ईन्टरनेशनल डलर कार्ड सेवा, विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सविधाहरु तथा कुनै पनि शाखाबाट रकमझिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुबिधाहरु पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
उक्त समारोहमा सामाजिक उतरदायीत्व कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले श्री भैरव नवदिप माध्यामिक विद्यालयलाई १ थान कम्प्यूटर र श्री महाकाली माध्यामिक विद्यालयलाई १ थान कम्प्यूटर गरी जम्मा २ थानकम्प्यूटर हस्तान्तरण गरेको छ ।
बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकलाई सेवाउपलब्ध गराउने अभिप्रायले अन्य विभिन्न स्थानमा चाँडै नै थपशाखा संचालनगर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानुभन्दा आफैँ उद्यमी बनेमा मुलुकमा समृद्धि हुने बताएका छन् ।
पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको छहरामा आज सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लि.को उद्घाटनमा गभर्नर डा. नेपालले मुलुकभित्र प्रशस्त आम्दानीको अवसर रहेकाले स्वदेशमा नै केही काम गरी स्वरोजगार बन्नुपर्ने बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण लगानी गरेर आर्थिकरुपमा सुधार ल्याउन सकिने बताए । विदेश गएर अरूको नोकर भएर कामगर्ने प्रवृत्ति त्याग्न पनि उनले आग्रह गरे ।
डा. नेपालले काम गर्नेका लागि देशमै ठूलो अवसर रहेको बताए । सरकारले जनताका घरदैलोमा बैंकमार्फत पैसा लिएर आएको उनले बताए । ‘बैंकबाट कर्जा लिएर व्यापार, व्यवसाय गर्नुहोस्, देशमै राम्रो अवसर छ,’ उनले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा लगानी गर्न आतुर रहेकाले अहिले पैसा नभएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाईएन भन्ने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए ।